Torchlite: Marketing nomerika miaraka amin'ny vahaolana ara-toekarena iaraha-miasa | Martech Zone
Alakamisy 5, 2015 Alakamisy 5, 2015 Douglas Karr
Amin'izao fotoana izao, mety efa nahita an'io teny nindramina io ianao Tom Goodwin, filoha lefitra ambony an'ny tetikady sy fanavaozana ao amin'ny Havas Media:
Uber, orinasa taxi lehibe indrindra manerantany, tsy manana fiara. Facebook, tompona haino aman-jery malaza indrindra eran-tany, dia tsy mamorona atiny. Alibaba, mpivarotra antsinjarany faran'izay sarobidy, tsy manana tahiry. Ary Airbnb, mpamatsy trano lehibe indrindra manerantany, tsy manana trano sy tany.
Misy izao Orinasa 17 miliara dolara amin'ilay antsoina hoe toekarena iaraha-miasa. Ireo orinasa ireo dia niaina fahombiazana lehibe tsy tamin'ny famoronana vokatra vaovao, fa tamin'ny famerenany ny fomba fiasan'izy ireo iray izay miteraka lanja amin'ny alàlan'ny fampitoviana ny olona izay mila zavatra amin'ireo olona manan-javatra hatolotra. Raha toa ka tsotra ny feony, dia satria izany no izy. Indraindray ny genius dia midika fotsiny hoe mahatakatra ilay mazava.
Ho an'i Susan Marshall, mpivarotra efa tranainy, nanjary nazava fa io karazana fisainana io - mamorona fifandraisana mifanentana tanteraka — dia tsy ho ilaina amin'ny sehatry ny marketing fotsiny, fa ilaina izany.
Efa zatra nilaza ireo mpivarotra fa nampitovy ny hazakazaka ny haitao; io orinasa kely sy salantsalany io izao dia manana fitaovana hifaninanana amin'ireo juggernauts. Amin'ny fampiharana, tsy tsotra izany. Na dia tsara kokoa sy be mpampiasa kokoa noho ny teo aloha aza ny fitaovana marketing dizitaly, ny orinasa dia mbola mila manam-pahaizana mahalala ny fampiasana ireo fitaovana ireo hahazoana vokatra tsara indrindra. Tonga amin'ny teboka iray izay tsy ahafahan'ny jeneraly ara-barotra intsony ny manaraka ny tontolon'ny nomerika miovaova ankehitriny. Mila manam-pahaizana manokana izy io, ary ho an'ny ankamaroan'ny orinasa, ireo manam-pahaizana ireo dia mety tsy ho hitanao mihitsy.
Mba hifaneraserana tsaratsara kokoa amin'ireo orinasa mitady fahaizana marketing miaraka amin'ireo manam-pahaizana ilain'izy ireo dia namorona i Marshall Torchlite - vahaolana ara-toekarena iraisana izay manome ny orinasa rehetra fahaizana manangana ekipa marketing manokana. Ao amin'ny fomba fiasa miady amin'ny maso ivoho, Torchlite dia manome tsena arahin'asa takiana amin'ny orinasa ahafahan'izy ireo manangona tambajotra manam-pahaizana manokana momba ny varotra tsirairay handrafetana sy hanaovana fanentanana dizitaly.
Manam-pahaizana manokana, na Torchliter, voafantina mifototra amin'ny filàn'ny orinasa manokana. Te hitarika fifamoivoizana bebe kokoa mankany amin'ny tranonkalanao ve ianao? Torchlite dia hampifanaraka anao amin'ny manam-pahaizana momba ny SEO miaraka amin'ny traikefa amin'ny indostriao hiantohana ny fanatsarana ny tranokalanao ary hahita anao ny mpanjifanao.
Torchlite dia manolotra orinasa iray safidy hafa hanakaramana mpiasa an-trano fanampiny na masoivoho ivelany. Ampitahao amin'ny vidiny isan'ora ny masoivoho na ny vidiny hanakaramana ireo manam-pahaizana manokana ao an-trano ($ 50,000 ho an'ny mpitantana media sosialy, $ 85,000 ho an'ny mpivarotra mailaka, $ 65,000 ho an'ny SEO / Web manam-pahaizana manokana), ary ho hitanao ny fomba misy tombony ara-bola.
Torchlite ahafahan'ny orinasa mitazona ny teknolojia marketing misy azy ireo ihany koa. Ny fahazoana miditra amin'ny tsena manam-pahaizana manokana manana fahaiza-manao amin'ny fampiasana saika ny fitaovana marketing nomerika dia midika fa ny orinasa dia tsy mila mamiratra sy manolo ny haitao misy azy ireo.
Ny orinasa mampiasa Torchlite dia manana safidy ihany koa Alefaso, mipoitra or vonoy tetika na programa marketing an-tserasera manokana amin'ny fotoana rehetra. Raha ny marketing amin'ny mailaka, ohatra, dia manaporofo fa izy no tsara indrindra amin'ny fitondrana fiovam-po raha toa ka tsy dia mahomby ny tetika hafa, malalaka ny orinasa manova ny fifantohany ary mamindra ny loharanon'izy ireo mora foana. Torchlite dia mitantana ity dingana iray manontolo ity hatrany am-piandohana ka hatramin'ny farany, midika izany fa ny tompona orinasa dia tsy tokony hiasa saina mihitsy momba ny fanakaramana, fitantanana na fanomezana outsource talenta fanampiny.
Mba hanampiana ny tompona orinasa hitadidy ny zavatra iasan'ny Torchliters azy ireo, Torchlite dia manome mpitantana kaonty natokana ho an'ny mpanjifa ary koa fidirana amin'ny dashboard amin'ny Internet. Amin'ny alàlan'ny tabilao Torchlite, ny mpanjifa dia manana fahitana feno hanaraha-maso ny fandrosoana, hijerena ireo lahasa voalahatra, hanaiky ny atiny ary hanaraka ny fomba akaiky hanatratrarany ny tanjon'ny marketing.
Liana amin'ny fanandramana Torchlite?
Misorata anarana amin'ny fampisehoana ny sehatra Torchlite famotsorana aloha anio!
Tags: fiaraha-miasaserivisy marketingteknolojia marketingoutsourcefanilofanilo